Ianao irery ve no mifehy ny ordinateranao? & Ndash; Semalt Expert
Ianao irery ve no mifehy ny ordinateranao? - Semalt Expert
Tena marina fa misy fiantraikany mivantana amin'ny fitaovana ny malware, anisan'izany ny ransomware. Fa ny malware botnet DDoS dia manana karazan-dingana samihafa, ny sasany amin'izy ireo dia afaka mifehy ny fitaovana ampiasainao raha toa kosa ireo hafa dia mitohy mihazakazaka toy ny rakitra fototra ary miandry ny torolalana avy amin'ny bot herder na botmaster. Ny botnets mivelatra manodidin-tena dia mamerimberina manao bota fanampiny amin'ny alalan'ny fantsona samihafa. Ny làlana mankany amin'ny aretina dia ahitana vulnerabilities amin'ny tranonkala, tenimiafina tenimiafina ahazoana ny fidirana amin'ny ID iray manokana an'ny mpisera, sy ny malware amin'ny petra-kevitry ny trozona. Na izany aza, izy rehetra dia mamela ireo hackers hifehy sy hifehezana ny ordinateranao na ny fitaovana findainao. Mazava ho azy, saika tsy vita ny manondro ny isa marina amin'ny bots, ny tombantombana dia manambara fa misy roa arivo tapitrisa amin'izy ireo.
Nahoana no noforonina botnets?
Nanazava i Frank Abagnale, Semalt Manager Success Manager, fa ny botnets dia noforonina ho amin'ny fikatrohana, fanakorontanana ataon'ny fanjakana, fanafihana tombony, ary antony hafa. Ny fikarakarana ny serivisy botnet amin'ny aterineto dia sarotra indrindra raha toa ka efa nanandrana nifandray tamin'ny tena spammer ianao.
Ahoana no ataon'ireo botnets?
Ny iray amin'ireo toetra tena tsara amin'ny botnets dia ny fahafahany mandray ny fampahalalana vaovao avy amin'ireo mpiompy bot..Miara-mifandray tsy tapaka amin'ny mpampiasa izy ireo, izay ahafahan'ireo mpanafika manova ny adiresy IP ary mampifanaraka ny zavatra sasany amin'ny safidiny. Ny drafitra botnet dia miova, ary ny rafitra dia rava amin'ny sokajy samihafa, toy ny model botnet model ary ny modely boter peer-to-peer.
Ny model botnet model
Rehefa misy fiara mifandray amin'ny serivisy foibe, ary ny spammer dia mikendry ny hametraka ny antsipiriany manokana. Ny fanafody santralina dia manatanteraka baiko manokana ho an'ireo botnets ary manova ny fitaovana ampiasaina mba hanavaozana ny torolalan'ny milina trondro.
Ny modely boter peer-to-peer:
Ity modely ity dia tompon'andraikitra amin'ny fihazonana lisitr'ireo solosaina azo itokisana sy tsy atokisana izay hampitana sy hanavaozana ny malware ireo hackers. Indraindray izy ireo dia mametra ny isan'ireo milisy enti-mamely noho ny fepetra takian'izy ireo ary mahatonga azy ireo ho sarotra ho an'ireo mpampiasa ny manara-maso ny anaran'ny mpampiasa azy sy ny tenimiafiny. Raha toa ianao ka tsy manana ny serivisy baikon'ny serivisy, dia mety ho lasibatra amin'ity fahalemena ity ianao. Mba hanamafisana ny fiarovana anao dia tokony hamindra ny botnets ianao ary hisakana azy ireo tsy hampihemotra ny mombamomba anao manokana
Esory ny aretina amin'ny fitaovana rehetra:
Ny fomba mahavariana hanafoanana ny botnetana dia ny fanafoanana ny aretina amin'ny fitaovana rehetra. Ho an'ireo fitaovana manokana, ireo paikady hahazoana ny fanaraha-maso ny milina dia ahafahana mandefa programa anti-malware na antitra, mametraka ny rindrankajy avy amin'ny loharano azo antoka ary manadio ny cache. Raha vantany vao vita ianao dia mora ny manala ny botnets ary afaka miantoka ny fiarovana anao amin'ny aterineto. Ho an'ny fitaovana IoT, tokony hazakazaka ny famerenana ny rafitra na hamolavola ny fitaovana araka ny fangatahanao. Raha toa ka tsy misy tranga ireo safidy ireo dia azonao atao ny manatona ny mpamatsy aterineto ary mangataka azy hanakatona ny orinasa mandritra ny ora vitsivitsy Source .